WAR CUSUB: PSG Oo Weerar Culus Ku Qaadaysa Real Madrid Iyo Xiddig 700 Milyan Lagu Xidhay Oo Ay Doonayso - Gool24.Net
WAR CUSUB: PSG Oo Weerar Culus Ku Qaadaysa Real Madrid Iyo Xiddig 700 Milyan Lagu Xidhay Oo Ay Doonayso
July 22, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Kooxda kubadda cagta PSG ayaa dhexda u xidhanaysa weerar culus oo ay ku qaadayso Real Madrid oo ay ka doonayso xiddigga uu Zinedine Zidane u arko mustaqbalka kooxda ee Viniciur Junior.
Real Madrid ayaa hore loo ogaa in PSG ay ka doonayso weeraryahanka reer France ee Kulian Mbappe oo ay ku qalqaalinayso inuu iska diido inuu heshiis cusub u saxeexo kooxdiisa si xagaaga dambe ay lacag jaban ugu heli karaan, laakiin kooxda reer France ayaa iyaduna kaga jawaabtay duullaan ay ku qaadday Los Blancos, waxaanay ka doonaysaa da’yarka reer Brazil ee Vinicius Junior oo qayb weyn ka qaatay guushii kooxdiisa ee xili ciyaareedkan ay ku hanatay horyaalka LaLiga.
Agaasimaha ciyaaraha PSG ee Leonardo ayaa liiska ciyaartoyda bartilmaameedka u ah kooxdiisa ku daray da’yarka ay isku waddanka yihiin ee Vinicius.
Sida uu qoray wargeyska Sport ee kasoo baxa waddanka Spain, kooxda reer France ayaa raadinaysa beddelka Kylian Mbappe oo qandaraaskiisu dhacayo sannadka 2022, isla markaana diiddan inuu qalinka u qaato heshiis cusub, taas oo ah sidii ay doonaysay Real Madrid.
Madaxda kooxda oo uu hormood u yahay leonardo ayaa u arka beddelka Kylian Mbappe inuu noqon karo Vinicius Junior haddii si fiican loo carbiyo, isla markaana la siiyo sirta qaabka goolasha loo dhaliyo, iyadoo laga caawinayo sidii kubaddiisu qaan-gaadh u noqon lahayd marka uu gaadho xerada ganaaxa.
Laakiin caqabadda ugu weyn ee haysata PSG ayaa noqon doonta in Real Madrid ay Vinicius kula jirto heshiis soconaya illaa sannadka 2025, kaas oo ay ku xidhan tahay 700 milyan oo qandaraaskiisa lagu burburin karayo.
Warbaahinta El Chiringuito ayaa iyaduna xaqiijisay in Leonardo uu haddaba ku hawlan yahay sidii uu u qaadi lahaa tallaabooyinka ugu horreeya ee Vinicius uu ku keeni karayo Parc des Prince, waxaanu u adeegsan doonaa qancinta 20 jirkan, xiddiga reer Brazil ee Neymar.